CAIx စျေး - အွန်လိုင်း CAIX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CAIx (CAIX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CAIx (CAIX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CAIx ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CAIx တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CAIx များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CAIxCAIX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0585CAIxCAIX သို့ ယူရိုEUR€0.0496CAIxCAIX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0448CAIxCAIX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0533CAIxCAIX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.529CAIxCAIX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.37CAIxCAIX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.31CAIxCAIX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.219CAIxCAIX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0783CAIxCAIX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0817CAIxCAIX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.31CAIxCAIX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.453CAIxCAIX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.318CAIxCAIX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.39CAIxCAIX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.9.82CAIxCAIX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0803CAIxCAIX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0886CAIxCAIX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.83CAIxCAIX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.407CAIxCAIX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.19CAIxCAIX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩69.54CAIxCAIX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦22.13CAIxCAIX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.31CAIxCAIX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.62
CAIxCAIX သို့ BitcoinBTC0.000005 CAIxCAIX သို့ EthereumETH0.000155 CAIxCAIX သို့ LitecoinLTC0.00102 CAIxCAIX သို့ DigitalCashDASH0.000604 CAIxCAIX သို့ MoneroXMR0.000625 CAIxCAIX သို့ NxtNXT4.24 CAIxCAIX သို့ Ethereum ClassicETC0.00831 CAIxCAIX သို့ DogecoinDOGE16.8 CAIxCAIX သို့ ZCashZEC0.000623 CAIxCAIX သို့ BitsharesBTS2.3 CAIxCAIX သို့ DigiByteDGB2.15 CAIxCAIX သို့ RippleXRP0.199 CAIxCAIX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00201 CAIxCAIX သို့ PeerCoinPPC0.202 CAIxCAIX သို့ CraigsCoinCRAIG26.53 CAIxCAIX သို့ BitstakeXBS2.48 CAIxCAIX သို့ PayCoinXPY1.02 CAIxCAIX သို့ ProsperCoinPRC7.3 CAIxCAIX သို့ YbCoinYBC0.00003 CAIxCAIX သို့ DarkKushDANK18.67 CAIxCAIX သို့ GiveCoinGIVE125.98 CAIxCAIX သို့ KoboCoinKOBO13.59 CAIxCAIX သို့ DarkTokenDT0.0539 CAIxCAIX သို့ CETUS CoinCETI167.98